गुन्डा नियन्त्रण अभियान कहाँ पुगेको छ? मैले दिनहुँजसो शून्य सहनशीलताको मान्यताबमोजिम गुन्डागर्दी र दादागिरी नियन्त्रणको निर्देशन दिएको छु। त्यसअनुरूप प्रहरी सक्रियता पनि बढेको छ। अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूको भागाभाग चलेको छ। भेटिएसम्मका गुन्डाहरू प्रहरीको फन्दामा छन्। मैले यो कार्यलाई अझ व्यापक…
राजधानी त्रासको जंगल भएको छ। किनभने, यहाँ चरी, बाघे र स्यालजस्ता गुन्डा–जीवहरू छन्। नागरिकका सुरक्षा, जिउधन र अमनचैन कुनै पनि बेला उनीहरूको शिकारमा पर्नसक्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डा पालिरहेका छन्, पोसिरहेका छन्। उसो त अहिले गुन्डालाई खोरमा हाल्ने अभियान जोडतोडका…
पन्ध्र वर्षको उमेरमै सोलो एल्बम 'परी' ल्याएर नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी रजिना रिमाल अहिले पार्श्वगायिकाका रूपमा स्थापित छिन्। फिल्म र कलेक्सन एल्बममा गरी आठ सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी उनले दोस्रो सोलो एल्बम 'रजिना'बाट पनि चर्चा बटुलिन्। यस वर्ष उनले…
छोराछोरीको गुनासो छ– बाउआमा कुरा बुझ्दैनन्। बाउआमाको दुखेसो छ– छोराछोरी टेर्दैनन्। यसै पनि दुई पुस्ताका बीच थुप्रै भिन्नता हुन्छन्। उनीहरूको लवाइखवाइ मिल्दैन, विचार मिल्दैन, मनोविज्ञान मिल्दैन र जिउने तरिका मिल्दैन। 'जेनरेसन ग्याप' अर्थात् पुस्तान्तरले सन्तान र अभिभावकको सम्बन्धमा खाडल उत्पन्न…
लुगाको काम के हो? सुन्दर देखाउने, शरीरलाई घामपानीबाट जोगाउने आदि। यसको आधारभूत काम लाज छोप्नु पनि हो। वानपिस, स्कर्टजस्ता आधुनिक र फेशनेबल पहिरनले कहिलेकाहीँ धोका दिन्छन् र 'सेक्सी' हुन खोज्नेलाई 'भद्दा' बनाइदिन्छन्। हलिउड र बलिउडका मात्र होइनन्, नेपाली अभिनेत्री र…
रंगमञ्चबाट फिल्ममा प्रवेश गरेर सम्भवतः सबैभन्दा जमेका अभिनेता हुन्, सौगात मल्ल। 'कागबेनी', 'लुट', 'कथा', 'उमा', 'सुनगाभा', 'छड्के' लगायत फिल्ममा उनले आफ्नो अभिनय कौशल देखाएर दर्शकको मन जितेका छन्। आफ्ना पात्रलाई जीवन्तता दिन कुनै कसर नछाड्ने उनी अहिलेका व्यस्त अभिनेतामा पर्छन्।…
पाटन, सुन्धाराकी श्रीजु नापित सफल मोडल बन्ने धुनमा छिन्। उनका घरपरिवार तथा टोलछिमेकमा कोही पनि यो पेशामा छैनन्। घरका अभिभावकले कति पटक उनलाई यतातिर नलाग्न सुझाव दिइसकेका छन्। तर, उनी मोडलिङको नशा र ग्ल्यामरको भोकले चुर छिन्।